किन रोकिदैन बालविवाह ? |
किन रोकिदैन बालविवाह ?
प्रकाशित मिति :2017-08-07 14:11:10
काठमाडौं । नेपालमा बालविवाह कानूनी रुपमा निषेध छ । कसैले बालविवाह गरेको प्रमाणित भएमा कानून बमोजिम ३ वर्ष कैद वा दश हजार रुपैँया सम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ । तर बालविवाह घट्नुको सट्टा बढेको देखिन्छ ।
लमजुङको बेसिशहर नगरपालिका– ११ चिति तिलाहरका बाबु वि.कले छोरी रविनाको विवाह १५ वर्ष नपुग्दै गत जेठमा तनहुँमा गराइदिए । रविना गाउँकै जनकल्याण उच्च माविमा कक्षा ८ मा पढ्दै थिइन् ।
गत जेठमै चितीकै भोजबहादुर वि.कले आफ्नी साइली छोरी राधिकाको विवाह १७ वर्षको उमेरमा गराए । राधिका जनकल्याणमै कक्षा १० मा बढ्दै थिइन् । भोजबहादुरले आफ्ना ४ छोरी मध्ये ३ छोरीको विवाह १७ वर्ष उमेर नपुग्दै गराइसकेका छन् । जेठी छोरी रिताको कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । विवाहसगैँ उनले पढ्न पनि छाडिन् । २४ वर्षीय रिताको अहिले आठ वर्षका छोरा छन् ।
रिताको माइली बहिनी लक्ष्मीको पनि १५ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो । उनले विवाह भएको एक वर्षपछि छोरा जन्माइन् । लक्ष्मीको छोरा ३ वर्षका भए तर हिँड्न बोल्न सक्दैनन् ।
चितिकै निर्मला वि.कले पनि आफ्नी जेठी छोरी परमिलाको १६ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदिइन् । कक्षा सातमा पढ्दै गरेकी परमिलाले विवाह गरेसगैँ पढाई पनि छाड्नुपर्यो । अहिले २२ वर्षकी भइन् । २ छोराकी आमा पनि ।
छोरी कसैसँग विग्रिन्छे कि भन्ने चिन्ताले नै आमाबाबुले छोरीको चाडै विहे गरिदिने गरेको निर्मला बताउँछिन् । यसका साथै गरिबी र अशिक्षा पनि मूल कारण हो ।
जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा एक लाख ३८ हजार १५ जना बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएको देखाएको छ । त्यसमध्ये एक लाख १५ हजार १ सय ५० बालिका रहेको देखाएको छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले समेत बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । चितीकै संगिता वि.कले फोन र फेसबुकमार्फत प्रेम सम्बन्ध भएपछि गत माघमा १५ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिन् । प्रविधिमा पहुँच पुग्नु राम्रो विषय भएपनि त्यसको दुरुपयोग हुँदा धेरै बालबालिकाहरु उमेर नपुग्दै कच्चा प्रेम गर्ने र विवाह गरिहाल्ने प्रचलन बढेको देखिन्छ ।
मानसिक र शारारिक रुपमा विकास नहुदै गरिएको यस्तो सम्बन्धले भविष्यमा थप जटिलता पैदा गरेको बताउनुहुन्छ चिकित्सा मनोविद् डा. मिता राणा ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शारारिक र मानसिक रुपमा विकास नहुदै गरिएको विवाहले मनोवैज्ञानिक रुपमै असर गर्छ । जसले गर्दा उनीहरुमा निरास हुने, आत्मबल कम हुने र अन्त्यमा डिप्रेसनको अवस्थामा पुग्ने गर्छ ।’
केन्द्रिय बालकल्याण समितिका बाल अधिकार अधिकृत रामबहादुर चन्द लैंगिक विभेदकै कारण बालिकाको छिटो विवाह गरिदिने प्रचलन छ । ‘समाजमा छोरी अर्काको घरमा जाने जात, भोलि विग्रिएमा कसैले लैजादैनन् भन्ने सोचाई छ । त्यसमाथि रजस्वला नहुदै छोरीको विवाह गरिदिए पुन्य हुन्छ भन्ने कुसंस्कार छ । त्यसैले पनि बालविवाह बढिराखेको छ ।’ चन्दले भन्नुभयो ।
बालविवाह एवम् दाइजो उन्मुलन राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राजकुमार महतोले कानुनी पक्ष नै फितलो हुँदा बालविवाहका घटना घट्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले बालविवाह सम्बन्धि पुस्तौदेखिको सामाजिक मूल्य, मान्यता र मानसिकता परिवर्तन र कानूनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एक वर्ष कैद दश हजार जरिबाना
नेपालको मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर वीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ । अठार वर्ष पूरा भई बीस वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले आ–आफ्ना संरक्षणको सहमति लिई विवाह गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । नयाँ ऐनमा उपदफा १ विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ भनिएको छ । यस्तै बालविवाह कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्मको कैद वा दश हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ भनिएको छ ।
मूलुकी ऐनको संशोधित रुप फौजदारी कसूरको प्रतिवदेन हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । संसदमा पारित भएसगैँ यो कानुन २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।